Yepamberi Nzeve tambo muchina chigero - Hunhu Nzeve tambo muchina chigero Vagadziri, Yakagadzirwa muChina - Dongguan Tuoyuan Precision Machinery Co LTD.
Imba > Zvigadzirwa > Mask muchina zvishongedzo > Nzeve tambo muchina chigero
Kumeso mask nzeve mutsetse kutenderera muchini chigero
TUOYUAN ichipa yakakwira kumhanya- zvidimbu mazana maviri paminiti iyo otomatiki ndege masiki muchina mutsetse unosanganisira imwe seti yendege chifukidzo chekucheka muchina uye seti imwe yemhete yekucheka earloop, inogona kupedzisa maitiro ekugadzira mbishi zvinhu, kupeta, kuumba, kucheka, kutungidza nzeve , kumeso kumeso kuburitsa. Yakabatsirwa ndeyekumhanya uye yakasimba. Isu tinotarisira kuve yako yakanakisa ndege maski muchina mutengesi wakagadzirwa muChina.
Tuoyuan ndomumwe wevanogadzira Nzeve tambo muchina chigero vagadziri uye vanotengesa muChina. Ndokumbirawo unzwe wakasununguka kutenga mhando yepamusoro Nzeve tambo muchina chigero mudura pano uye uwane kotora kubva kufekitori yedu. Zvakare, yakasarudzika sevhisi inowanikwa.